Thola oxhumana nabo ngaphandle kwezithombe ku-Android nge-Identiconizer! | Izindaba zamagajethi
Bangaki oxhumana nabo obakhombe ngokugcwele kudivayisi yakho yeselula ye-Android? Ukuze sizibukeze zonke, kuzofanele siye kuphela ekusebenziseni i- «uhlu lokuxhumana» kukhompyutha yethu, lapho-ke sizobona ukuthi bambalwa kuphela kubo abaphumelele ukubeka isithombe esibakhomba kahle .
Ngeshwa iningi lalaba oxhumana nabo abajwayele ukwabelana ngesithombe esibakhomba ngokugcwele, lokhu kuyisikhathi okufanele senze ngaso lokho zama ukubathola ngamagama noma nge-imeyili. Esizokubona kulabo oxhumana nabo abangenaso isithombe kuhlu, kuyinto engasho lutho ephindaphindwa kuzo zonke zazo. Manje, uma sisebenzisa ithuluzi elithakazelisayo elinegama le-Identiconizer! singathola ukubeka isithombe ukuze sizikhombe ngokushesha okukhulu.
1 Landa, faka futhi ulungiselele i-Identiconizer!
1.1 Landa i-Identiconizer APK!
1.2 Ukucushwa kwesikhombi!
1.3 Buyekeza uhlu loxhumana nabo kudivayisi yethu yeselula ye-Android
Landa, faka futhi ulungiselele i-Identiconizer!
Isikhombi! Ithuluzi lomthombo ovulekile lokuthi okwamanje ungalithola kuphela kusuka kuwebhusayithi esemthethweni kanjiniyela wayo; Ngalesi sizathu, inqubo ingaphikisana ngandlela thile ekuqaleni, yize imiphumela kamuva izokwenelisa ngokuphelele; Ngalesi sizathu, sincoma ukuthi ulandele amathiphu alandelayo ukuze ukwazi landa bese ufaka futhi ulungiselele lolu hlelo lokusebenza oluthandekayo lwe-Android lokho kuzosisiza ukubeka ukuhlonza kulabo oxhumana nabo kuhlu lwethu abangenaso isithombe esihlanganisiwe.
Phambilini, kufanele ufake ukumiswa kwe-Android OS bese ucisha ibhokisi elikuvumela ukuthi ufake izinhlelo zokusebenza ozithola ngaphandle kwesitolo.
Landa i-Identiconizer APK!
Sincoma ukuthi uqonde kusayithi elisemthethweni ukuze ubheke ezinye zezici ku-Identiconizer! kuhlongozwa ngumakhi wayo; khona lapho uzothola izinto ezimbili ezibaluleke kakhulu ongakhetha kuzo; akufanele udideke uma kukhulunywa khetha isixhumanisi esifanele ukulanda le APK, Kuzodingeka ukhethe eyodwa kuphela enombala obomvu lapho uhlelo lokulanda lishiwo kahle kahle.
Lokhu kuyinzuzo enkulu, ngoba ungayithola kwikhompyutha yomuntu siqu, gcina i-APK kwimemori ye-Micro SD bese uyisebenzisa ukuze uyifake kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-Android. Uma uyilanda kusuka kudivayisi efanayo yeselula kufanele sesha uhlelo lokusebenza lokuhlola ifayela, Yebo, kuzovela iphutha endaweni yesaziso.
Ukuze Isikhombi! Ngeke ukuthole ekhasini lasekhaya noma kudeskithophu yohlelo lwakho lokusebenza lwe-Android, ngakho-ke kuzofanela uhlole indawo yezinhlelo zokusebenza ezifihliwe; Khona lapho usungavele uthande isithonjana saleli thuluzi, okufanele ulikhethe ukufaka ngokushesha ukumiswa kwalo. Uzothola indawo lapho ungakhetha khona phakathi kwezitayela eziningi, ezibhekisa ku-Retro eyodwa, enye enokubukeka kwe-Gmail nezinye izinketho ezimbalwa.
Ukukhetha okwenzayo kuncike ekunambithekeni nasekuthandweni kwakho lapho ubheka oxhumana nabo ngesithonjana esithile.
Kukulesi sikhathi lapho iqhinga elincane okufanele lisetshenziswe lifika, ngoba ngemuva kokukhetha isitayela nokuvala iwindi elishoyo, kufanele sithathe inketho ethi "sebenzisa othintana nabo abangenaso isithombe"; ngalokhu, izinguquko zizosebenza ngokushesha.
Ungahlola ukubuka kuqala kwemiphumela ngenketho ngokuqhubeka kancane phansi ethi "Uhlu Lothintana Nabo".
Buyekeza uhlu loxhumana nabo kudivayisi yethu yeselula ye-Android
Yebo, uma siqhubeke kahle sizobe sinethuba lokuncoma uhlu loxhumana nabo ngendlela ehlukile kunaleyo ejwayelekile; uhlelo "lohlu loxhumana nabo" lusendaweni efihliwe, ngaphandle kokuthi ubeke isithonjana kudeskithophu yakho.
Uma usukhethile uhlelo lokusebenza kusuka ku- «uhlu loxhumana nabo» uzokwazi ukubona lokho labo bangane abangenaso isithombe, manje baboniswa ngesithonjana esihlukile, okuwumphumela walokho okwenziwe yi-Identiconizer! Uma ukhethe isitayela se-Gmail, uzothola labo oxhumana nabo nebhokisi lombala othize, lapho kuzoba khona uhlamvu lokuqala lwegama labo. Uma ukhetha isitayela se-Retro noma enye ekhona ku-Identiconizer! Ukucushwa, kuzobonisa okuthile okufana kakhulu namachashazi noma imigqa enamapikseli.
Sengiphetha, i-Identiconizer! kungenye indlela enhle kakhulu ye- nikeza ukuhlonza okuncane kulabo oxhumana nabo kusuka kuhlu lwethu, okuthi ngasizathu simbe azange zihlanganise isithombe esiziveza ngokuphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Nikeza isithombe koxhumana nabo ngaphandle kwezithombe ku-Android nge-Identiconizer!